विद्यार्थीको ग्रेड घटे शिक्षक कारबाहीमा | Latest news of Nepal,world news, articles, literature, Business news, Entertainment and more
चैत १२ गते, २०७५ - १६:२१
प्रतिवेदनमा एसईई परीक्षामा तीन वर्षसम्म एकै विषयमा ५० प्रतिशतभन्दा बढी विद्यार्थीको ग्रेड ‘डी’ र ‘ई’ आएमा सम्बन्धित विषय शिक्षकलाई सेवाबाट मुक्त गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
काठमाडौं । विद्यार्थीले कम ग्रेड ल्याए शिक्षकलाई नै कारबाही गर्ने गरि शिक्षा नीति बन्न लागेको छ । सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर घटिरहेको जनगुनासो बढिरहेको बेला विद्यार्थीले कम ग्रेड ल्याएमा विषय शिक्षकलाई नै कारबाही गर्ने गरि प्रस्ताव तयार भएको हो ।
प्रस्तावमा माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई)मा विद्यार्थीको कम ग्रेड आएमा प्रधानाध्यापकको ग्रेड रोक्का र विद्यालयको अनुदान समेत कटौटी गर्ने व्यवस्था छ । सांसद उमेश श्रेष्ठको नेतृत्वमा शिक्षा नीति परिमार्जन गर्न बनेको प्रतिवेदनमा परीक्षाको नतिजाको आधारमा विद्यालयलाई पुरस्कार र दण्डको व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरिएको छ ।
प्रतिवेदनमा एसईई परीक्षामा तीन वर्षसम्म एकै विषयमा ५० प्रतिशतभन्दा बढी विद्यार्थीको ग्रेड ‘डी’ र ‘ई’ आएमा सम्बन्धित विषय शिक्षकलाई सेवाबाट मुक्त गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । साथै ५० प्रतिशतभन्दा धेरै विद्यार्थीले डी र ई ग्रेड ल्याएमा विद्यालयको प्रधानाध्यापकको समेत ग्रेड रोक्का गर्नुपर्ने र विद्यालयले पाउँदै आएको सरकारी अनुदान घटाउने प्रूताव समेत छ ।
मंगलबार शिक्षा समितिमा पेश गरिएको प्रस्तावित प्रतिवेदनअनुसार एसईई परीक्षामा ९० प्रतिशतभन्दा बढी विद्यार्थीले जीपीए ३.८ ल्याउने विद्यालयले कुल बजेट निकासाको ५ देखि १० प्रतिशत प्रोत्साहन रकम प्राप्त गर्ने छन् । हिमाली र उच्च पहाडी क्षेत्रमा आवासीय विद्यालय स्थापना गर्न सरकारलाई निर्देशन दिन पनि उपसमितिले समितिलाई सुझाव दिएको छ ।
चैत १२ गते, २०७५ - १६:२१ मा प्रकाशित
एजेन्सी । चिनीयाँ आर्थिक बृद्धिको गति यस वर्षको दोस्रो त्रैमासमा करिब तीन दशककै सबैभन्दा निम्न स्तर...
यी हुन् हाम्रो तराई डुवानमा पर्ने कारण
काठमाडौं । भारतको जमिन पश्चिम अग्लो र पूर्व होचो छ । जमिनको बनोटका कारण पानी पूर्वतिर बगेको छ । पश्चिम...
संसद स्थगन प्रति कांग्रेसको आपत्ति, विपद व्यवस्थापनमा सरकार उदासिन देखियो (विज्ञप्तीसहित)
काठमाडौं । शुक्रबारको संसद वैठक सूचना टाँस गरि स्थगित गरिएको बारे प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले...
विदेशबाट आउँदा के–के सामान ल्याउन पाइन्छ ? जान्नुहोस् सरकारले यी कुरा ल्याउन निषेध गरेको छ
काठमाडौं । सरकारले आगामी जेठ १५ देखि कार्यान्वयन गर्ने गरि विदेश जाने र आउने यात्रुले के कस्ता सामानहरु...
सिंचाइ डिभिजन भोजपुरका प्रमुख १ लाख ८० हजार घुससहित पक्राउ
काठमाडौं । सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय भोजपुरका प्रमुख मोहन बाबु यादव १ लाख ८० हजार रुपैयाँ घुससहित...
सुन किन्दै हुनुहुन्छ ? यस्तो छ आजको सुनको मुल्य
काठमाडौं । पछिल्लो केहि दिनदेखि सुनको मुल्य नेपाली बजारमा स्थिर रहेको छ । गत शुक्रबारदेखि सुनको मुल्यमा...
बाढी पीडितहरुको उद्धार र राहतमा जुट्न सांसदहरुलाई सभामुखको आग्रह
काठमाडौं । सभामुख कृष्णबहादुर महराले संघीय संसदका सदस्यहरुलाई बाढी पीडितहरुको उद्धार र राहतमा जुट्न...
संसद बैठक स्थगित, कांग्रेस र राजपाको प्रस्ताव अस्वीकृत
काठमाडौं । प्रतिनिधि सभाको आजको वैठक सूचना टाँस गरि आगामी साउन ८ सम्मको लागि स्थगित भएको छ । संघीय संसद...
कांग्रेस र राजपाद्वारा संसद सचिवालयमा स्थगन प्रस्ताव दर्ता, बाढीबारे छलफल गर्न माग
काठमाडौं । विपक्षी नेपाली कांग्रेस र राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा)ले प्रतिनिधिसभामा ‘जरुरी सार्वजनिक...
बाढीमा पनि राष्ट्रवाद खोज्नेहरूले देश डुबाए !
काठमाडाैं । प्रत्येक वर्ष बाढी पहिरोले सयौंको ज्यान लिने गरेको छ भने हजारौंलाई घरवारबिहीन बनाउने...